RecyclingWorks WasteWise Forum - Xarunta EcoTechnology
Nofeembar 10, 2021 @ 10:00 am - 12: 00 pm
Madasha Xagaaga ee 2021 WasteWise Forum waxaa la qaban doonaa ku dhawaad Arbacada, Nofeembar 10 ka 10:00 am-12: 00 pm. Madashan, Waaxda Ilaalinta Deegaanka Massachusetts waxay ku siin doontaa casriyeyn ku saabsan wax -ka -beddelka la soo jeediyay ee mamnuucidda qashinka ee gobolka oo dhan ka jira.
Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka waxay iftiimin doontaa isbeddelada barnaamijka ee WasteWise iyo Caqabadda Soo -kabashada Cuntada, iyo sidoo kale abaalmarinno la siin doono kuwa ku guuleystey 2020 WasteWise.
Soo -bandhigayaashu waxay wadaagi doonaan kheyraadka iyo dhaqannada ugu wanaagsan ee taageeraya u hoggaansanaanta mamnuucidda qashinka, waxayna muujin doonaan barnaamijyo guuleysta si looga hortago qashinka, loo kordhiyo dib -u -warshadaynta, iyo in laga weeciyo agabka cuntada qashin -qubka.
+ Kudar Jadwalka Google+ Ku dar iCalendar
Yaraynta qashinka cuntada ee dugsiyada K-12: Xeeladaha Kahortagga, Deeqaha, iyo Dib u warshadaynta
10: 00 AM - 12: 00 Maqaalka
qashinka cuntada, forum, Dib -u -warshadaynta, qashin, WasteWise